Ankizivavy maro no mahazo antoka fa mangeja ny tady. Marina izany, fa ampahany kely ihany: ny mpibata dia manohana ny fivelaran'ny tongolobe sy ny gluteus maximus, ary ny voankazo mivoatra dia mampiasa faran'izay betsaka kokoa noho ny vatany matavy noho ny asany lehibe. Noho izany, ny hozatra dia novolavolaina tamin'ny fomba hafa, fa tsy ny mpikiky fotsiny ihany, dia hampiroborobo ny fandoroana ny fametrahana ny tahiry noho ny fandaniana kalokalo tena mavitrika indrindra.
Nahoana no ilaina ny squats?
Ny zavatra manan-danja indrindra izay hanome anao hetsi-panoherana dia hatsikana, elastika, "borosy breziliana" ary fihovitrovitra. Aza hadinoina aorian'ny fampiofanana tsirairay mba hanaovana fanazaran-tena fototra amin'ny fanitarana ny hozatry ny vozony tsy hivoatra ny hozatra fanamaivanana. Na izany aza, dia mampidi-doza ny olona izay mirefotra in-3-5 isan-kerinandro ary mitaky lanjany.
Matetika mampiasa bibilava ny tongotra mando, fa mba hampihenana ny masony matavy dia mbola ilaina kokoa noho ny aerobic enta-mavesatra, fa tsy hery fotsiny. Ny fotoana voalohany aorian 'ny fiantombohan'ny fampiofanana, ny habetsaky ny fihetsika mifanohitra, dia mety hitombo indraindray noho ny zava-misy izay hanomboka eo ambanin'ny masaka matavy ary ny hozatry ny hozatra. Na izany aza anefa, aza matahotra an'ity, miaraka amin'ny sakafo ara-dalàna sy ny fampiharana tsy tapaka, hanjavona ny masomboly matavy, ary ho mendri-piderana ny andilanao.
Firy ny kaloria nodorana rehefa nivily?
Toy ny ankamaroan'ny fanatanjahan-tena, ny mpibata dia mahomby amin'ny vola miditra amin'ny angovo izay azontsika amin'ny sakafo, saingy tsy mahatratra ny fiaramanidina mahery vaika. Zava-dehibe ny mahatsiaro fa ny haavon'ny masomboly voalohany, ny ezaka bebe kokoa amin'ny zavamaniry dia mandany amin'ny hetsika rehetra, ka manatsara ny habetsaky ny kaloria manodidinin'ny tsirairay.
Vehivavy iray mitentina 60 kg eo ho eo ho an'ny 5 minitra fiofanana, mandritra ny fotoana hijanonany mandritra ny in-100, handoro 43 calories. izany hoe Raha mianatra ny maraina sy ny hariva mandritra ny 5 minitra fotsiny ianao dia afaka mandoro 86 calories.
Na dia izany aza, tsy hoe ny fihinanana calories mandritra ny squats dia miteraka ny fanampiana amin'ny fahaverezan'ny lanjany. Ny kibatra misy enta-mavesatra (hono, tehina avy amin'ny bar na kibay) dia mampitombo ny vokatra amin'ny 30-50%. Ankoatr'izay, ny fampiofanana mavesatra dia manampy amin'ny fananganana masin'ny tazomoka, izay amin'ny maha-eo azy fotsiny, amin'ny fampiasana azy eo amin'ny vatany, dia mampiasa kaloria misimisy kokoa noho ny masira tsy matihanina. Noho izany, hihena ny fihenan'ny angovoo, ary na dia mihazona ny rafitra efa antitra aza dia mety hihena ny lanjanao. Ary raha ny sakafo isan'andro dia ambany kalozia 200-300 (omena sotroina 4-5, bun na sotrokely iray, sombin-tsakafo fanampiny iray na makà ampahany kely amin'ny sakafo fotsiny), ary ny fahaverezan'ny lanjany dia handroso haingana kokoa.
Toetoetran'ny trano: teknika
Ny lanjan'ny lanjany miaraka amin'ny mpikiky dia mety ho mora sy tsy misy ratra, ny tena zava-dehibe dia ny manao ny fampisehoana raha tsy aorian'ny fampiharana hazavana ankapobeny ary vita amin'ny fitohanana.
Mitsangàna ho amin'ny marina, manoloana ny soroka, ny tanany eo amin'ny vatana na eo amin'ny andilany, tazony ny lamosiny amin'ny endriny ary ataovy azo antoka fa mitoetra foana izy mandritra ny fihodinana manontolo;
manosihosy mahitsy, manosika ny havan-trano hiverina, toy ny hoe mipetraka eo amin'ny seza tsy hita maso;
Rehefa nahatratra 90 degre ambanin'ny zoro, dia manova làlana hetsika ary manaiky ny toerana fanombohana.
Izany teknika izany dia manampy amin'ny fananganana antokon'olona tsara tarehy ary tsy misy fiatraika be loatra.
Firy ny sit-ups mila ilaozana lanja?
Toy ny amin'ny fanatanjahan-tena ara-panatanjahan-tena, dia zava-dehibe ny habeny. Na dia mitondra izany karazana enta-mavesatra izany aza ianao, aza manao zavatra be loatra.
Ho an'ny mpanombona dia ampy ho an'ny 15% in-25 isan-kerinandro ny fihinanana klasika isan-kerinandro (na telo isan-kerinandro). Rehefa mahatsikaritra fa tsy reraka ianao rehefa avy eo 3 fomba fitsangatsanganana 25, dia marika azo antoka fa fotoana ahafahanao manamboatra saribakoly sy manomboka amin'ny fiofanana amin'ny vatom-pihodinana, ny fitomboan'ny vozona ary mandoro kaloria hafa.
Ny fampiharana mahomby indrindra amin'ny fahaverezan'ny lanja
Tena ilaina ny valin-tsakafo
Fiatrehana ny varavarana
Ledum - fampiharana
Amin'ny inona no manao akanjo jiro tsara tarehy?
Madonna mangataka ny fisamborana an'i Guy Ritchie
Ahoana ny famerenana ny lactation?
Rindrina hosodoko ao anaty trano
Antibiotika momba ny laryngitisan'ny ankizy
Marshmallow avy amin'ny apples - recipe
Cocci ao amin'ny loto